०७७ जेठ ०७ गते बुधबार ई. स. २०२० मे २० तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य – Everest Pati
वि.सं.२०७७ जेठ -७,बुधवार, ई.सं.२०२० मे -२० ,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० बछलागा, प्रमादी, उत्तरायण, ग्रीष्म,ज्येष्ठ कृष्णपक्ष
तिथि-त्रयोदशी , १९:५८ बजे उप्रान्त चतुर्दशी, नक्षत्र-अश्विनी , २३:१२ बजे उप्रान्त भरणी, योग-आयुष्मान् , ०६:१९ बजे उप्रान्त सौभाग्य,
करण-गर ०७:०१ बजेदेखि वणिज , १९:५८ बजे उप्रान्त गर, चन्द्रराशि-मेष,आनन्दादि योग-मृत्यु, सूर्योदय-५:१४,सूर्यास्त-१८:४८,
दिनमान-३३ घडी ५३ पला । प्रदोष व्रत। सायन सूर्य मिथुनमा १४:५७ बजे प्रवेश।
गल’त साथि संगतमा लाग्नाले पढाई लेखाई बिग्रनेछ भने आफन्त तथा अग्रजहरुको चित्त बुझाउन मु’स्किल पर्नेछ । माया प्रेमको यात्रामा उतार चडा’ब आउने योग रहेकोछ भने जीवन साथि सँग सामान्य कुरामा मनमु’टाब सिर्जना हुनेछ । खानपानमा ध्यान नदिए स्वा’स्थ्य सम्बन्धि सम’स्या आई खर्च बढ्नेछ । आफन्त तथा अग्रज सँग सामान्य कुरामा राय बाजिनेछ ।
खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । सहयोगहिरु जुट्नाले रोकिएको काम सहजै सम्पादन हुनेछन् । दाजुभाई तथा अग्रजहरुको हरेक क्षेत्रमा साथ रहने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । परिवारका साथ स्वादिष्ट भोजनका साथ रमाउन सकिनेछ ।
सं’क’ट ब्याबस्थापनका लागी चालिएका प्रयासमा बाधा हुनेछ भने फ’सा’उ’नेहरु हाबि हुनेछन् । हतार हतारमा काम गर्दा बि’ग्रन सक्छ होस पु¥याउनु होला । समस्या तथा चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्दा मानशिक त’ना’ब बढ्नेछ । भौतिक सामाग्रीको प्रयोग गर्दा वा सवारि साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घ’ट्ना’ घ’ट्न सक्छ । साथिभाईहरुले नै असहयोग गर्नेछन् भने अरुको स्वार्थको लागि प्रयोग होईनेछ ।
सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । ब्याबस्थापन ज्ञानको कमिले आर्थिका कारोबार बिग्रने सम्भावना रहेको छ । आत्मिय मित्र तथा आमा सँग छु’ट्टिएर वस्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । पढाई लेखाईमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि अरुदिन भन्दा बढि मेहनेत गर्नुपर्नेछ ।
खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घा’टा लाग्नेछ । माया प्रेममा नजिक हुँने समय रहेकोछ भने आफन्त तथा गुरुवर्गहरुको सहयोगले पढाई लेखाईमा भनजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकिको सहकार्यमा राम्रा तथा परिणाममुखि काम गर्न सकिनेछ ।
अन्य काममा व्यस्त हुँदा पढाई लेखाई कमजोर रहनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बलाई समय दिन नसक्दा तपाईबाट टाडिनेछन् । मोजम’स्ति तथा रमाईलो तिर ध्यान जादा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सकछ । बोल्दा वा कुनै प्रस्तुति दिदा ख्याल गर्नुहोला बोलिको प्रभाव घ’ट्ने तथा गलत अर्थ लाग्ने प्रस्तुति हुँन सक्छ ।
‘ज्यानको बाजी थापेर लड्न तयार हुन्छौँ तर झुक्दैनौँ, अतिक्र’मित भूमि हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौँ’